31 MAY MAALINTA JOOJINTA CABISTA-SIGAARKA EE CAALAMKA Muxaadaro Contact us Quraan Bogga Gargaarka Wayeelada Dugsiyada Agoonta Forum Sheekooyinka Sheeko Qosol Badan
E-mail	31 MAY MAALINTA JOOJINTA CABISTA-SIGAARKA EE CAALAMKA
Maanta oo ay bishu tahay 31 Maajo 2012 waa maalinta loo asteeyey joojinta cabista sigaarka ee caalamka, taasoo looga gol leeyahay in bulshada caalamka lagu wacyigeliyo khatarta uu leeyahay.
Guud ahaan adduunyada cabista sigaarka ama isticmaalka Tubaakada waxaa lagu qiyaasaa 1.45 bilyan qof iney isticmaasho maanta. Ku dhawaad Hal bilyan (80%) waxay ku nool yihiin waddamada soo koraya
Cabista sigaarka wuxuu sababaa dhimasho degdeg ah ama cimri gaabad, waxaana la sheegaa in sanad walba ay u dhintaan sigaar cabista qiyaas dhan 6 milyan oo qof, in ka Cabista sigaarka wuxuu ku badan yahay ragga qiyaastii shan jeer in ka badan haweenka.
Cabista sigaarka wuxuu sababaa dhimasho degdeg ah ama cimri gaabad, waxaana la sheegaa in sanad walba ay u dhintaan sigaar cabista qiyaas dhan 6 milyan oo qof, in kabadan 5 milyan waa dadka caba sigaarka iyo kuwii horey u cabi jiray, halka Lix boqol Kun ay yihiin dadka si dadban ku caba sigaarka (second-hand smoke).
Cabista sigaarka waxaa la socda 12 maaddo oo kiimiko ah oo dhalin kara cudurka kansarka. Waxaana ka mid ah maaddada (Tar, Arsenic , benzene , formaldehyde, carbon monoxide iyo ammonia) waxaa kalow ku jira maadada Nicotin-ka oo sababa in la qabatimo sigaarka jir ahaan iyo maskax ahaan
Cabista sigaarka wuxuu sababaa 25 cudur waxaa ka mid ah kuwa ku dhaca wadnaha iyo xididdada 20-30% (Heart attack and Stroke), wuxuu kaloo sababaa cudurada sambabka ku dhaca sida Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), sambabka oo weynaada ama adkaada (Emphysema), Chronic Bronchites; wuxuu kaloo sababaa cudurka kansarka ku dhaca sambabka 30-35 %. Kansarka Dhuunta iyo Afka (larynx and mouth), kansarka ku dhaca hunguri-wadeenka (Esophagus), Pancreas-ka, Caloosha, Beerka, Xameytida, Xiidmaha, Kaadi-heysta, Qabsinada, Ilma galeenka. Wuxuu kaloo keenaa dhalma la'aanta ragga iyo haweenka
Xagga maskaxda wuxuu horseedaa hurdadoo yaraata, degganaansho la'aan iyo qeybta fikirka iyo xusuusta oo hoos u dhaca taasoo ka timid xididdada masakaxda oo adkaada (Arteriosclerosis). Wuxuu kaloo isbeddel ku sameeyaa dabciga iyo la dhaqanka bulshada isagoo had iyo jeer acsaabtiisa kacsan tahay
Cabista sigaarka waxay waxyeelo u geysataa Aragga Indhaha ,Maqalka dhagaha iyo Maqaarka sidoo kale wuxuu wax yeelo u geystaa dibnaha, ciridka iyo ilkaha
Waxaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan iney ka fogaadaan cabista sigaarka bacdamaa diinteenna Islaamka aysan oggoleyn in nafta la tahluukeeyo; iyo weliba waxyeellada caafimaadka aan kor ku soo xusnay uu keenayo
Mahadsanidin Prof. Osman M. Dufle